Thunderbird 10 ayaa diyaar u ah soo dejinta | Laga soo bilaabo Linux
Thunderbird 10 ayaa diyaar u ah soo dejinta
Sidaan horeyba u ognahay wax soo saarkeeda Firefox isla nooc ka mid ah Macmiilka Boostada de Mozilla: Thunderbird kaas oo ku jira 10 version ma hayo war ku habboon.
Haddii aan dareemay isbeddel yar oo muuqaal ah oo ay ku jiraan astaamo cusub badhamada, laakiin si kastaba ha noqotee, isticmaalkeedu xoogaa wuu sarreeyaa. Asal ahaan Thunderbird waxay kudareysaa awooda baaritaanka shabakada, ciladaha qaar lagu saxay qabyo qoraallada iyo meelaha qaar.
Si daacadnimo ah, wareegga horumarka ee ay qaadaneyso ayaa umuuqda mid doqonnimo yar Mozilla si aan si dhab ah wax ugusoo kordhinin aakhirka. Tani waxay noqon kartaa 9.1 version de Thunderbird. Sikastaba, waad kala soo dagsankartaa xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Thunderbird 10 ayaa diyaar u ah soo dejinta
Hada elav, shaqsiyan waxaan dhawaan bilaabay adeegsiga macaamiisha emaylka. Waan ku qanacsanahay "idedove" 5, laakiin anigoo og inay ka timaaddo mozilla, waxaan isweydiiyay kuwee kale oo horumar wanaagsan yeelan kara oo ugu yaraan kara kheyraadka qof kasta oo aan ku beddelin kombuyuutar hore meesha. Salaan.
Hagaag waxaan u maleynayaa in Thunderbird aysan aheyn inay ahaato mid qunyar socod ah ilaha
"Icedove" = "Thunderbird" oo debian ah
Horeba halkan baloogga waxaan uga hadalnay waxyaabo kale oo beddelaad ah. Waxaad leedahay tusaale ahaan Sylpheed, ama Claws Mail 😀
Uma adeegsado macaamiisha arrintaas (si aan u arko haddii maalin uun aan bilaabayo) laakiin marwalba waxaan maqlaa in KMail uu fudud yahay, sidoo kale Evolution oo kan ugu dambeeya liistada uu noqon doono Thunderbid (iyo jeclaan). Marka la soo koobo yaa yiri, dhammaantood waxay u yimaadaan wax walboo ka fudud Thunderbird.
Xaqiiqdii KMail hadda waxay u isticmaashaa Akonadi qaab qasab ah, tanina waxay ka dhigeysaa mid aan ka fududeyn Thunderbird sida such
Ahaanshaha isweydaarsiga ayaa kafiican, laakiin kaliya daaqadaha, aragtida 2010 ayaa aad uga dhameystiran thunderbird.
Ma ii sheegi kartaa waxa aad jeceshahay ee Muuqaalka 2010 ee Thunderbird-kayga uusan haysan? Hagaag, taa badalkeeda .. Muxuu yahay muuqaalkaaga muuqaalka ah ee 2010 oo aadan ku isticmaali karin Thunderbird? Kaliya in la ogaado.
Xasilloon, xasilloon. Cidii qaadataa waa sax.
Tusaalaha cad waa wadarta isku xidhka dhamaan xafiiska Microsoft, fududeynta hotmail, tusaale ahaan Thunderbird sababa jira awgood maan arki karin boostada galka spam, hadiiba aan fariin fiican helay iyo wixii lamid ah Markaa waxaan dhaafi doonaa dib u eegis iyaga barbar dhigaysa, markaa waad arki kartaa. Waxaan aadayaa iskuulka hada xd
Wadarta isku xidhka Suite? Dabcan hadday isku shey tahay, isla shey. Fududeynta waraaqaha? Maxaa aad u adag oo ku saabsan dirista emaylka Thunderbird? Dhibaatooyinka IMAP? Miyaadan u maleyn karin in laga yaabo in dhibaatadu tahay Hotmail? Way iska cadahay in Muuqaalka ay tahay inuu sifiican u muuqdo maxaa yeelay Hotmail waa M $ .. Sikastaba, haku mashquulin inaad isbarbar dhigto, uma maleynayo inaad qofna halkan ka dhaadhicineyso inuu u adeegsado Muuqaalka waxyaabo badan oo wanaagsan sida aad adigu leedahay.
Dabcan cidna kuma qanciyo :), maahan wax ku saabsan Linux XD, waxay isiineysaa dareenka ah inaad uhadasho sida qofka ku saabsan difaaca maxaa yeelay wuu ogyahay inuu lumin doono dooda.
Ma aqaano inay tahay dhibaato hotmail ah, laakiin kmail ayay ahayd, markaa waxaan ka shakisanahay inay tahay dhibaato hotmail ah.
Macallin aan aad u ixtiraamo ayaa i baray in markaan dagaal galo, hubi inaan ku guuleysan doono. Difaaca kuma jiro, maadaama Rayonant uu kuu sharaxay waxa sababa xanuunadaada, sidaan u sheegayayna, dhibaatadu maaha Thunderbird.
Relax Elav, dhamaanteen fikradaheena waan haysanaa, in kastoo aan jeclaan lahaa Pandev inuu cadeeyo waxa aan adiga kuu shaqeyneynin, waxaan ahaa isticmaale Thunderbird waqti dheer ilaa inta aan ka fahmayo dhibaatada waa in hotmail uusan taageerin IMAP, kaliya POP3 iyo halkaas, waxa aad dhahdo way dhacaan, maxaa yeelay aniga aniga emailkeyga gmail, iyo kan jaamacadda oo sidoo kale ku jira barxadda gmail, dhammaan fayllada iyo kuwa kale ayaa u muuqda
Dhibaatadu waa onkodbir maxaa yeelay kmail hadaan arko saxaarada spam.
ps: macalinkaagu wuu ka fiicnaa carlos marx XD
"Macallinkaagu wuxuu ka fiicnaa Carlos Marx XD"
Waxaan u maleynayaa inaadan isticmaaleynin erayga ku haboon, maadaama nidaamka fikradeed ee uu soo jeediyay Marx (iyo Engels) uu ku bilaabmayo naqdin ku saabsan dhaqanka ku habboon (gaar ahaan himilada Jarmalka) oo uu yeesho imminka ka soo horjeedka fikirka wanaagsan ee loo yaqaan "maaddada lahjadda ' (macnaheeda falsafadeed) iyo "Maadiga taariikhiga ah" ee xagga dhaqan ahaaneed iyo dhaqaale.
Ha u qaadan cadeynteyda mid khaldan, waxaan u maleynayaa hadii xukun laga gaaro wax, waa in la cadeeyaa, hadii kale waxaa jirta qatar muujineysa jahli ama naive.
Waxaan kuu sheegayaa in aan ahaa qof aad ufiican waxaanan kuu sheegayaa shaqsi dareen qoto dheer leh, maxaa yeelay waxaan bartay Carlos Marx oo markaad timaado 2 ama 3 bilood ka dib markaad aqriso soo jeedintiisa, waxaad ogaatay in midkoodna aan la gaari karin, taasi waa sababta aan ugu yeero ku habboonaanta ama laga yaabee inay ka sii xun tahay, dhalanteed.
Waxaa laga yaabaa in ereyga saxda ah ee waxa aad tilmaamaysaa uu yahay "utopian" maadaama "ku habboonaanta" iyo "dhalanteed" ay u jeedaan waxyaabo kale.
Dhinaca kale, sharaxaadda nidaamka wax soo saar iyo naqdinta hanti-goosadka ay sameeyeen Engels iyo Marx weli waa mid aad u taagan oo sax ah.
Maxay ahayd doqon ama utopian waxay ahaayeen saadaasha ku saabsan isbeddelka qaabdhismeedka iyo aasaasidda nidaamyada hanti-wadaagga (taasoo horseedaysa shuuciyad horumarsan), maaddaama geeddi-socodka la yiri, haddii ay macquul tahay, uu ka dhib badnaan lahaa sida ay moodeen.
Dabcan, waxay ku habboon tahay dhammaan xirmooyinka xafiiska ms, taasi waa waxa loogu talagalay.
Dabcan waxay ku shaqeysaa hotmail, waxay ka yimaadeen isla horumariye.
Waxay u egtahay in la yiraahdo x wuxuu la jaan qaadayaa daaqadaha, markay yihiin uun alaabada loo sameeyo daaqadaha ...
Waa hagaag taasi waa taas, taasi waa waxa aan idhaahdo, waxaan jeclahay aaladaha kaabaya nidaamka oo dhan iyo haddii ay suurtagal tahay in wax waliba si isku mid ah loo isticmaalo, markaa si fiican.
Isku xidhka nidaamka intiisa kale ayaa hubaal noqon kara mid faa'iido leh, dhibaatada mararka qaarkood badanaa waa kharashka, mana aha inaan u jeedo qiimaha.
In kasta oo Thunderbird aysan si sax ah u ahayn codsi fudud, haddana way ka fududdahay Muuqaalka, oo laga yaabo inuu ka ammaan badan yahay, sidoo kalena lagu sii hagaajin karo sii ballaadhinta ama iyadoo wax laga beddelayo koodhkeeda.
Si loo helo doodo si loo awoodo in la iibiyo nooc kasta oo cusub oo ka mid ah barnaamijyadeeda, Microsoft badanaa waxay ku dembaabtaa muujinta-gurguurta adoo ku fulinaya tikniyoolajiyad cusub barnaamijyadooda (oo runti wax u tari kara ama aan waxtar u lahayn arjiga), iyada oo aan laga fiirsan tixgelinno badan oo la xiriira isticmaalka kheyraadka ama amniga, taas oo si lama huraan ah u keenta dhammaan noocyada dhibaatooyinka isticmaalayaasha. Dhibaatadani kuma eka Microsoft, laakiin shirkaddani badanaa waa mid ka mid ah kuwa sida ugu fiican u tusaalaya.
Marka laga hadlayo qaddarinta pandev92, waxaan in ka badan ku raacsanahay, inaan ahay isticmaale hore oo ka mid ah alaabada Microsoft waxaan garwaaqsanahay inay si wanaagsan isu kaabayaan.
GNU / Linux waxaan ku isticmaalaa google docks iyo google kaalandarka, kama seegi aragtida gabi ahaanba.
Marka aynu isticmaalno xamil ...
Shakhsi ahaan, oo aan isku dayay maareeyayaasha kale ee emaylka, waxaan doorbidaa kan, kaas oo haddii aan u kala soocin lahayn wax aad u wanaagsan qof walba, isticmaalka mowduucyada (muuqaalka) websaydhka sida ay isugu jiraan, laakiin inta kale aad bay u wanaagsan yihiin, weli waan ma habeyn karo barowsarka maareeyaha dhexdiisa laakiin waxaan dhigayaa 8 dhibcood 10 ka mid ah inta kale, waxaa jira waxyaabo badan oo lagu hagaajinayo, laakiin illaa iyo hadda way garaacaysaa inta hartay.
Iyada oo ay la socoto terminaalka: Muuji 10-ka geeddi-socod ee cuna xusuusta ugu badan
Wikirating, wakaaladda qiimeynta isha furan